တရုတ် NIutech ပတ်ဝန်းကျင် - အကောင်းဆုံးအမြင့်-Quanlity ထုတ်ကုန်များနှင့်အတူရေနံဖြည်းညှင်းစွာသက်ရောက်စနစ်
လုံလောက်စွာပေါင်းခံမျှော်စင်၏နှစ်ဦးနှစ်ဖက် line ကနေထုတ်ကုန်ပစ္စည်းနှင့်အတူအပူလဲလှယ်ပြီးနောက်ကုန်ကြမ်းရေနံမီးဖိုထဲသို့ဝင်ခြင်းနှင့်လိုအပ်သောအပူချိန်အထိအပူသည်။ မီးဖိုအတွက်အပူပြီးနောက်ကုန်ကြမ်းရေနံ 1 မှာဓာတ်ဆီအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု fter အအေး, Non-မီးလောင်ပေါက်ကွဲလွယ်တဲ့ဓာတ်ငွေ့မျှော်စင်ရဲ့ထိပ်မှာတယ်စေနိုင်သည်, ပေါင်းခံများအတွက်ပေါင်းခံမျှော်စင်သို့ပြောင်းရွှေ့နေသည် st လေထုလိုင်းနှင့်2မှာအလင်းဒီဇယ်အစိတ်အပိုင်း ကြိမ်မြောက် လေထု လိုင်း,3မှာမိုးသည်းထန်စွာဒီဇယ်အစိတ်အပိုင်း ကြိမ်မြောက် မျှော်စင်၏အောက်ခြေရှိလိုင်းနှင့်မိုးသည်းထန်စွာရေနံ။ ကုန်ကြမ်းပလပ်စတစ်ရေနံအတွက်ဖယောင်းအကြောင်းအရာအတော်လေးမြင့်မားသည်, အဆိုပါကုန်ကြမ်းပလပ်စတစ်ရေနံမီးဖိုမှတဆင့်ဖလှယ်အပူပြီးနောက် catalytic က de-လဆန်းလုပ်ငန်းစဉ် fixed အိပ်ရာဓာတ်ပေါင်းဖိုသို့ဝင်သော, ပြီးတော့ပေါင်းခံများအတွက်ပေါင်းခံမျှော်စင်သို့ပြောင်းရွှေ့သည်, တစ်ဦးချင်းစီနှစ်ဦးနှစ်ဖက်လိုင်းထုတ်ကုန်တယ်ပါလိမ့်မယ်။ non-မီးလောင်ပေါက်ကွဲလွယ်တဲ့ဓာတ်ငွေ့လောင်စာတစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာအဖြစ်ကိုမီးရှို့ဘို့မီးဖိုထဲသို့မိတ်ဆက်သည်။ ဓာတ်ဆီနှင့်ဒီဇယ်ပိုငျးကိုစဉ်ဆက်မပြတ်အယ်လကာလီအဝတ်လျှော်သန့်စင်စက်ရုံကိုအဘို့ရေနံရောနှောမှုစနစ်သို့လွှဲပြောင်းနှင့်စျေးကွက်လိုအပ်ချက်ဖြည့်ဆည်းနိုင်သည့်အတွက်ပြောင်းလဲနေသောဓာတ်ဆီနှင့်ဒီဇယ်ရဖို့ရောစပ်ရသည်။ မျှော်စင်၏အောက်ခြေရှိမိုးသည်းထန်စွာရေနံမီးဖိုနဲ့ရေနွေးငွေ့ဘွိုင်လာများအတွက်လောင်စာထောက်ပံ့ဖို့မိုးသည်းထန်စွာလောင်စာရေနံတိုင်ကီသို့ပြောင်းရွှေ့လျက်ရှိ၏ အဆိုပါအိပ်ပျော်မိုးသည်းထန်စွာရေနံစျေးကွက်လိုအပ်ချက်အရသိရသည် blended ပြီးတော့လောင်စာဆီအဖြစ်ရောင်းစားလိမ့်မည်။
ရေနွေးငွေ့ဘွိုင်လာစနစ်ကရော်ကရေနံ system ကိုရေ system ကို Compression ကိုစနစ်ကရေနံရောနှောမှုစနစ်ထိန်းချုပ်ရေးစနစ်၏အေးတိုင်းနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ကရေနံလိုင်းစနစ်က non-မီးလောင်ပေါက်ကွဲလွယ်တဲ့ဓာတ်ငွေ့စနစ်က: အဆိုပါရေနံပေါင်းခံယူနစ်လုံးဝအောက်ပါအဖြစ် 8 စနစ်များသို့ကွဲပြား
1 ။ ဒါဟာအတောအတွင်းအတွက်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်များနှင့်လုပ်ငန်းဝင်ငွေသိသိသာသာတိုးတက်လာပါလိမ့်မည်, ထိုစဉ်ဆက်မပြတ်ဖြစ်စဉ်ကိုနားလည်သဘောပေါက်ရောစပ်ခြင်းနှင့်ကုန်ကြမ်းဆီသန့်စင်စက်ရုံကို, ပစ္စည်းကရိယာတွေရဲ့ပြည့်စုံတစ်စုံ၏လုပ်ငန်းစဉ်စွမ်းရည်တိုးမြှင့်, ထုတ်လုပ်မှုအချိန် minimize နှင့် output ကို၏အရည်အသွေးပိုကောင်းအောင်နိုင်ပါတယ်။2။ non-မီးလောင်ပေါက်ကွဲလွယ်တဲ့ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်ညစ်ညမ်းမှုလျော့နည်းစေခြင်းနှင့်လည်းစွမ်းအင်ချွေတာအဖြစ်ကုန်ကျစရိတ်လျော့နည်းစေတယ်လေမသာသောလောင်စာအဖြစ်မီးရှို့မီးဖိုထဲသို့မိတ်ဆက်သည်။3။ fixed အိပ်ရာဓာတ်ပေါင်းဖိုသုံးခုအဓိကအားသာချက်: (1) ။ ထိထိရောက်ရောက်ကုန်ကြမ်းရေနံအတွက်ညစ်ညူးသောအကြောင်းအရာများကိုလျင်မြန်စွာဓာတ်ကူပစ္စည်း deactivates ဒါကြီးမြင့်သောပြဿနာကိုဖြေရှင်း။ (2) ။ ဒါဟာဓာတ်ကူပစ္စည်းပြန်လည်နားလည်သဘောပေါက်အလွန်လည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချနိုင်ပါတယ်။ (3) ။ အဆိုပါ catalytic က de-မှားသောစိတ်နှင့်ကင်းလွတ်အကျိုးသက်ရောက်မှုမြင့်မားဆက်ပြောသည်တန်ဖိုးနှင့်အတူဓာတ်ဆီနဲ့အလင်းဒီဇယ်များ၏အထွက်နှုန်းနှုန်းကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်လည်းထိရောက်စွာရေနံအရည်အသွေးကိုတိုးတက်စေနိုင်ပါတယ်မသာ။4။ ပေါင်းခံစနစ်၏ပြီးပြည့်စုံသောအစုကိုအလိုအလျှောက် PLC (programmer ယုတ္တိဗေဒထိန်းချုပ်မှု) စနစ်ကထိန်းချုပ်ထားသည်အလိုအလျောက်ရည်ညွှန်းအချက်များကိုထိန်းချုပ်ထိုကဲ့သို့သောဒါအပေါ်ဒေတာစုဆောင်းခြင်း, တွက်ချက်မှု, စံချိန်, ပုံနှိပ်အစီရင်ခံစာပုံစံများ, နှိုးဆော်သံနှင့်အမျှများပြားလှသောလုပ်ငန်းဆောင်တာရှိပြီးမှရရှိ။
စက်မှုစဉ်ဆက်မပြတ်, ကြီးမား throughput, ကုသမှုထိရောက်မှုနှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်မြှင့်တင်ရန်။ အနိမ့်အပူချိန် pyrolysis နည်းပညာ, အနိမ့်စားသုံးမှုသီးသန့်, ရေနံအထွက်နှုန်းနှင့်အရည်အသွေးမြှင့်တင်ရန်, ရေရှည်, ထုတ်လုပ်မှု၏စဉ်ဆက်မပြတ်နဲ့မှန်မှန်လည်ပတ်သေချာ, သိသိသာသာပစ္စည်းကိရိယာများ * သက်တမ်းကိုချဲ့ထွင်။ သီးသန့် Anti-ကြက်, အပူဖြန့်ဖြူးနည်းပညာ, ပစ္စည်းကို enable အညီအမျှအပူနှင့်? လုံးဝအောင်မြင်အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်ရန်, pyrolized ။ စစ်ဆင်ရေးလုံခြုံစိတ်ချသေချာစေရန်, တံဆိပျနည်းပညာသီးသန့်ပူ။ ဓာတ်ငွေ့သန့်စင်ခြင်းနှင့်ကျန်ရှိသောအပူပြန်လည်အသုံးချနည်းပညာသီးသန့်, သန့်ဓာတ်ငွေ့မီးလောင်ပေါက်ကွဲလွယ်တဲ့ဓာတ်ငွေ့အဖြစ်အပူ system ကိုအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပြီးကျန်ရှိသောအပူ dully အသုံးပြုသွားမည်နိုင်ပြီးသိသိသာသာကုန်ကျစရိတ် running minimize, အပိုအပူအရင်းအမြစ်မပါဘဲ pyrolysis တုံ့ပြန်မှုများအတွက် Self-ထောက်ပံ့ရေးသဘောပေါက်လာတယ်။ ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း၏အိပ်ဇောဓာတ်ငွေ့အားလုံးထုတ်လွှတ် parameter သည်အီးယူ၏အီးယူနှင့်ဓနသဟာယနှင့်အမေရိကန်က EPA ၏လိုအပ်ချက်ဖြည့်ဆည်း, စမျးသပျခဲ့သညျ။ တစျခုလုံးကိုထုတ်လုပ်မှုလိုင်း, PLC အသိဉာဏ်ထိန်းချုပ်မှု, သတိပေးခြင်း, နှိုးဆော်သံနှင့် Auto-ဆုံးမခြင်း function ကိုချမှတ်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအခွအေနေအောက်မှာစစ်ဆင်ရေးအာမခံထား။ လူအင်အား, အနိမျ့အလုပ်လုပ်ပြင်းထန်မှုနှင့်သန့်ရှင်းသောထုတ်လုပ်မှုများအတွက်အနိမျ့လိုအပ်ချက်။
အီးယူထဲမှာနှင့်ဓနသဟာယစံနှင့်အမေရိကန်အတွက် EPA စံတွေနဲ့ကိုက်ညီမှုထုတ်လွှတ်သတ်မှတ်ချက်
core မူပိုင်ခွင့် (ပြည်ပ)
core မူပိုင်ခွင့် (ပြည်တွင်း)
ယခင်: စွန့်ပစ်ပလပ်စတစ် pyrolysis စက်ရုံအကောင်းဆုံးအမြင့်-Quanlity ထုတ်ကုန်များ
နောက်တစ်ခု: စက်မှုအဆက်မပြတ်အပိုင်းအစတုရုမြို့ Pyrolysis ကိရိယာများ
ဖြေ ကျနော်တို့ 10000T / Y ကို} 20000T / Y ကို} 30000T / Y နှင့်ပိုကြီးစွမ်းရည်များကိုနိုင်
ဖြေ စက်မှုအဆက်မပြတ်အပိုင်းအစ တုရုမြို့ Pyrolysis ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း; စက်မှုအဆက်မပြတ်စွန့်ပစ်ပလတ်စတစ် Pyrolysis လိုင်း; ရေနံဖြည်းညှင်းစွာသက်ရောက်မှုစနစ်; ကာဗွန်က Black နောက်ထပ်ကုသမှုစနစ်
ဖြေ As fora10,000T/Y line, the workshop of pyrolysis section is 48m*20m*9m, which is excluding tire (or plastic) shredding and finished products treatment workshops
ထုတ်လုပ်မှုရှိသောထိန်းချုပ်မှုအဘို့, စစ်ဆေးခြင်းနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစဉ်အတွင်းလိုအပ်တစ်ဦးကㄩအဘယ်သူမျှမကြိုးစားပါနှင့်။ တစ်ဦး 10,000T / Y ကိုလိုင်းသည်ကအကြောင်း 3-4 စည်းစိမ် / ပြောင်းကုန်ပြီလိုအပ်ပါတယ်
မေး: Delivery အချိန်?
မေး: သင်၏ကုမ္ပဏီဆောင်ရွက်သောဝဘ်ဆိုက်တပ်ဆင်ပေး Turn-Key ကို Project မှတော်မူမည်လော
တစ်ဦးကㄩကျွန်တော်တို့ရဲ့နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးအတွက်သီအိုရီနှင့်အလေ့အကျင့်ပေါင်းစပ်ဖို့အပြင်းအထန်တောင်းဆို။ ကျနော်တို့နှစ်ပေါင်းများစွာ pyrolysis စက်ရုံ၏လက်တွေ့ကျတဲ့စစ်ဆင်ရေးအတွေ့အကြုံရှိသည်နှင့်အကြှနျုပျတို့တှေ့နှငျ့အညီအဆိုပါအဆင့်မြှင့်တင်နှင့်ပြုပြင်မွမ်းမံဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ အဆိုပါအတောအတွင်းမှာကျနော်တို့ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများရှိ * အပင်အများအပြားစီးပွားရေးနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်ပြေးဖောက်သည်ရှိသည်။
မေး: သင်သည်သင်၏ပြေးစက်ရုံ site ကိုသွားရောက်လည်ပတ်ပေးနိုင်မလား
မေး: ရေနံနှင့်ကာဗွန်အနက်ရောင်များ၏ applications များကဘာတွေလဲ
A: ကျွန်တော်တို့အဆက်မပြတ် pyrolysis ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းကထုတ်လုပ်အဆိုပါရေနံသတ်မှတ်ချက် SH / T0356-1996 အမှတ်4အလင်းဆီရေနံနှင့်အတူလိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ပေါင်းခံဖြစ်စဉ်ကိုကြီးမားတဲ့အာဏာအနိမ့်မြန်နှုန်းဒီဇယ်အင်ဂျင်, အင်ဂျင်နီယာနှင့်စိုက်ပျိုးရေးယာဉ်များလျှောက်ထားနိုင်ပြီးနောက်ထုတ်လုပ်ရေနံအဏ္ဏဝါ / စသည်တို့ကိုအဆိုပါရေနံပေါင်းခံဘို့အမြင့်မားသောအပူတန်ဖိုးနှင့်အနိမ့်ဆာလ်ဖာအကြောင်းအရာ, မီးလောင်ရာအတွက်အသုံးပြုနိုင်, မီးစက်နှင့်ကုန်ကြမ်းရေနံရှိပါတယ် အင်ဂျင်နီယာနှင့်မီးစက်အမျိုးမျိုးတို့ကို။ ကာဗွန်က Black ၏လျှောက်လွှာအဘို့, အသေးစိတ်ရဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်
ယခင်: Manufactur standard Pyrolysis Oil Distilling - OEM Customized Aste Plastic Pyrolysis Plant - 2017 High quality Tire Rubber Powder Pyrolysis Machine - Fully Continuous Waste Rubber Recycling Pyrolysis Machine – Niutech Environment – Niutech Environment – Niutech Environment
နောက်တစ်ခု: အပြည့်အဝဆက်တိုက်စစ်ဆင်ရေးနှင့်အတူပလတ်စတစ် Pyrolysis စက်ဖြုန်း
စဉ်ဆက်မပြတ်ရေနံရွှံ့နွံ Pyrolysis ပစ္စည်း
စဉ်ဆက်မပြတ်အပိုင်းအစတုရုမြို့ Pyrolysis ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
စက်မှုအဆက်မပြတ်အပိုင်းအစတုရုမြို့ Pyrolysis စက်
စက်မှုအဆက်မပြတ်စွန့်ပစ်ပလတ်စတစ် Pyrolysis စက်
ရေနံရွှံ့နွံ Resource ကုသမှုပစ္စည်း
ရေနံရန် Pyrolysis ပလတ်စတစ်
တုရုမြို့ Pyrolysis စက်ရုံအပိုင်းအစ
ပလတ်စတစ် Pyrolysis ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းဖြုန်း
ပလတ်စတစ် Resource ကုသမှုပစ္စည်းဖြုန်း
ရော်ဘာ Pyrolysis ပစ္စည်းဖြုန်း
နောက်ဆုံးရနည်းပညာအဆက်မပြတ်စွန့်ပစ်တုရုမြို့ Pyrolys ...